Mitatitra serivisy tsy hita - Filankevitry ny morontsiraka afovoany
Bin tsy foana? Voalohany, jereo raha nisy sticker voasary napetraka teo amin'ny sarony. Ity sticker ity dia hanome fampahalalana momba ny antony tsy nahalany ny kobao. Manome toromarika momba ny fomba hanitsiana ny olana sy hanangonana ny dabanao koa ny sticker.
Mety tsy voangona noho ny iray na maromaro amin'ireto antony manaraka ireto:
Ataovy azo antoka fa eo amin'ny sisin-dalana ny dabanao ny alina alohan'ny andro fanangonana.
Hamarino kalandrie fanangonana mba hahazoana antoka fa avoakanao ny dabam-bary marina.
Tokony ho vitanao ny manidy ny sarom-bilany mba hisorohana ny fako miparitaka eny an-dalana.
Mety mavesatra loatra ny kobanao ka tsy azo angonina – mihatra ny fetra lanja.
Nisy zavatra diso hita tao amin'ny dabanao.
Tsy tonga tany amin'ny dabao ny kamiao mpanangom-bokatra.
Raha tsy misy sticker eo amin'ny dabanao dia mety ho tsy hita izany. Raha mitatitra serivisy tsy hita dia tsidiho fotsiny ny tranokala famandrihana an-tserasera ao anatin'ny 48 ora manindry eto na mifandray amin'ny Foiben'ny serivisy mpanjifa amin'ny 1300 1COAST (1300 126 278).